Doorashada Tanzania - BBC Somali
27 Oktoobar 2010
Image caption Ololaynta doorashada Tanzania
Doorashooyinka guud ee dalka Tanzania ayaa lagu wadaa inay dhacaan maalinta Axadda ee soo socota. Waa markii Afraad ee doorasho ay ku tartamaan asxaab badan ay ka dhacaan dalkaasi oo xoriyaddiisa ka heley dalka Ingiriiska sannadkii 1961kii. Doorashooyinka ayaa isugu jira kuwa madaxweynenimada iyo baarlamanka. Madaxweynaha haatan talada haya Jakaya Mrisho Kikwete ayaa ka mid ah musharixiinta jagada madaxweynenimada, isagoo dhowraya in markii labaad xilkaasi loo soo doorto. Laga soo bilaabo garoonka diyaaraha ee Julies Nyerere, ilaa laga soo gaaro bartamaha magaalada Daressalaam waxaa suran boorar iyo calamada asxaabta siyaasadeed ee ku tartamaya doorashada guud ee dalka Tanzania oo bishan 31keeda ka dhici doonta guud ahaan dalka ayna ku jiraan jasiiradaha Zanzibar oo qeyb ka ah jamhuriyadda Midowdey ee Tanzania.
Codbixinta doorashadan oo maalin qura ka dhici doonta dalka waxay u kala qeybsan tahay, kan madaxweynaha Jamhuriyadda, madaxweynaha jasiiradaha Zanzibar, mudaneyaasha baarlamanka dalka iyo wakiilada jasiiradaha Zanzibar.
Dhanka madaxtinimada dowladda dhexe waxaa sharaxan ilaa 7 musharax oo uu ku jiro Madaxweyne Jakaya Mrisho Kikwete oo ka socda xisbiga talada haya ee Chama cha Mapinduzi CCM.
Waxaana lixda xisbi ee mucaaradka musharaxiinta ugu cadcad ka mid ha Dr Wilbroad Slaa oo ka tirsan xisbiga CHADEMA iyo Dr Ibrahim Lipumba oo ka socda Civic United Front (CUF).
Madaxtinimada Jasiiradaha Zanzibar waxaa sidoo kale u taagan 7 musharax oo ay ugu cad cad yihiin madaxweyne ku xigeenka Tanzania Dr Ali Mohamed Shain oo ka socda xisbiga CCM iyo hoggaamiyaha xisbiga CUF Dr Seif Shariif Hamad. Iyadoo sida la wada ogsoon yahay doorashada madaxtinimada ee Zanzibar lagu tilmaamo mid leh xasaasiyad gaar ah , marka loo eego dhanka nabad gelyada iyo siyaasadda intaba.
Tanzania oo ay ku nool yihiin dad tiradooda lagu qiyaasayo ilaa 42 milyan ayaa rasmi ahaan uga diiwaan gashan 18 xisbi siyaasadeed , kuwaas oo shantii sannaba doorahada madaxtinimada ka sokow u tartama kuraasta baarlamanka oo gaaraya 239.
Kuraastaasi 189 ka mid ah waxaa iska soo dhex doorta shacabka ku nool qeybta dhulweynaha ee loo yaqaan Tanganyika, hlka jasiiradaha Zanzibar oo shacabkeeda lagu qiyaaso ilaa 1 milyan iyo 70 kun ay ku leeyihiin 50 kursi. Zanzibar oo maamul hoosaad leh waxay leedahay oo kale aqalka wakiilada oo tiradoodu gaareyso 50 xubnood kuwaas oo shantii sannaba mar la soo doorto.
Sida uu dhigayo dastuurka Tanzania haweenka, dhalinyarada, dadka naafada ah waxay baarlamanka ku leeyihiin kuraas u gaar ah oo marka la isku wada daro gaaraya ilaa 75, mana ahan kuwo ay tartan u galaan, balse waa magacaabis toos ah oo ku xiran xisbi walba inta uu ka helo kuraasta caadiga ee tartanka loo galayo.
Madaxweynaha Jamhuriyadda ayaa isaguna uu dastuurka u oggolaanaya inuu soo magacaabo 10 xubnood oo baarlamanka ka mid noqda.
Shacabka ku dhaqan dalka waxay u badan yihiin Muslimiin iyo Christian, balse diimo kalena dalka way ka jiraan. Inkastoo aaney dastuurka ku caddeyn qaabka awoodda loo qeybsanayo, hadana waxay u muuqataa in Muslimiinta iyo Christianka uu marba mid qabto talada dalka, iyadoo haatan madaxweynaha dalka Kikwete uu yahay Muslim.
Ilaa iyo 19 milyan oo qof oo ka diiwaan gashan guddiga doorashada qaranka ayaa xaq u leh inay codkooda dhiibtaan.
Tanzania ayaa tan iyo 1961kii markii ay xornimada ka qaadatey Ingiriiska waxaa ka talinayey xisbiga CCM oo uu aasaasey Mwalimu Julius Kambarage Nyerere oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyey ee dalka.
Asxaabta mucaaradkana inkastoo ay baarlamanka xubno ku leeyihiin, hadana tan iyo markii hanaanka asxaabta badan dalka laga hirgeliyey marnaba ma dhicin inay la yimaadaan awood siyaasadeed oo ay ugu baabac dhigi karaan xisbiga talada haya.